बडादशैँ शुरु, आज घटस्थापना यस्तो छ साइत र विधि ! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > बडादशैँ शुरु, आज घटस्थापना यस्तो छ साइत र विधि ! (भिडियो सहित)
बडादशैँ शुरु, आज घटस्थापना यस्तो छ साइत र विधि ! (भिडियो सहित)
admin October 16, 2020 October 16, 2020 धर्म सँस्कृति, भिडियो, समाचार	0
काठमाडौं । कात्तिक १ गते शनिबारदेखि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ शुरु भएको छ । दशैंको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घरघरमा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजासहित घटस्थापना गर्छन् । घटस्थापनाको साइत कात्तिक १ गते शनिबार बिहान ११ः४६ बजे शुभ रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ । ज्योतिषका अनुसार यस बर्षको घटस्थापना साइत यस्तो छ ।
यस वर्ष घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र परेकाले दोष नाश गर्ने अभिजित् मुहूर्त दिनुपर्दा ११ः४६ बजेको साइत निस्किएको उहाँले बताउनुभयो । नवरात्र शुरु हुने घटस्थापनाको साइतका लागि लग्न र बेला पनि उपयुक्त दिइएको जनाइएको छ ।
घटस्थापना गरिएको कलशको मुखमा नवदुर्गालाई आह्वान गरी नौ रात १० दिनसम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना एवं दुर्गा सप्तशती चण्डी, देवीभागवत्, देवी स्तोत्रलगायत देवीको महिमागान गाइएका श्लोक वाचन एवं पाठ गरिन्छ ।
देशभरका शक्तिपीठमा घटस्थापनाकै दिनदेखि विशेषरूपमा भक्तजनको भीड लाग्ने भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले भौतिक दूरी कायम गरी दर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल गुह्येश्वरीलगायत राजधानीका मुख्य शक्तिपीठमा भक्तजनलाई दर्शन गर्न दिइएको छैन ।
कक्षा कोठा भित्र नै शिक्षक र छात्रा यस्तो हर्कत गर्दगर्दै यस्तो अवस्थामा रङ्गेहात समातिए
घटस्थापनामा नवदुर्गालाई खुशी पार्न के गर्ने ? जय दुर्गे भगवानी माता कि!
महिलाहरूले नै मोबाइलमा सबैभन्दा बढि यस्ता कुरा हेर्दा रहेछन् – भिडियो हेर्नुहाेस
रत्नपार्कमा हात हेर्न बस्ने बाजेले युवतीलाई यसरी फसाएपछि – पूरा हेर्नुहोस